रविना देशराजलाई प्रश्न : पति थप्न प्रतिस्पर्धा गर्ने हो की सुधार्न ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
रविना देशराजलाई प्रश्न : पति थप्न प्रतिस्पर्धा गर्ने हो की सुधार्न ?
चैत्र १, २०७४ यमुना अर्याल (काफ्ले)
काठमाडौँ — यही साता बैँकर रविना देशराजको भनाइ निकै चर्चामा रह्यो । बैँकको उच्च तहमा कार्यरत सिमित महिला मध्येकी अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड समेत हात पारिसकेकी कार्यक्षमताका हिसाबले पनि बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने रविना यस पटक अनौठो मागका कारण चर्चामा रहिन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा खुलेरै भनिन्, दुई तीन वटी श्रीमती राख्ने लोग्नेमान्छेलाई हाम्रो समाजले सम्मान गर्छ भने अब हामी महिलाहरुले दुई तिनवटा श्रीमान् साथमा राख्न किन नपाउने ? लोग्नेमान्छेले सानले जेठी, माइली, कान्छी श्रीमती भन्न पाउँछ भने महिलाहरुले पनि जेठो, माइलो, कान्छो श्रीमान् भन्न किन नपाउने ?
हुन त यो भन्दा पहिला पनि एकजना आफुलाई अधिकारकर्मी बताउने महिलाले खुलेआम भनेकी थिइन्, लोग्ने मान्छेले अर्काकी श्रीमती भगाउन हुन्छ भने हामी महिलाले अर्काका लोग्ने हडप्न किन नहुने ? उनले आफ्नो लोग्ने छाडेर अर्कैसँग दोश्रो बिहे गरेकी थिइन्, प्रसंगबस कुरा निस्कँदा उनको मुखबाट यो वाक्य फुस्कियो । संविधानले नै हरेक नागरिकलाई वाक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ, मनमा लागेको कुरा निर्धक्क राख्न जो कोहीले पनि पाउँछ । तर समाजमा चिनिएका व्यक्तिले आफ्ना माग वा आवाज सार्वजनिक गर्दा क्षणिक चर्चा भन्दा पनि दीर्घकालिन महत्व र गरिमाको हेक्का राख्न नसक्दा उल्टै बदनामी भएका कैयन दृष्टान्तहरु छन् ।
खास गरी लोकतन्त्रको पुर्नस्थापनापछि हामी कहाँ अधिकार र समानताका कुराहरु निकै जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । सरकारले नै विशेष वर्गलाई लक्षित गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । महिलाको कुरा गर्ने हो भने संबैधानिक निकायहरुमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा पचास प्रतिशतको हिस्सा पाउनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । समाजका अगुवा महिलाहरु नै आफ्नो बृत्ति विकास, शिक्षा, रोजगार, प्रजनन अधिकार लगायतका अन्य अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउनुको साटो लोग्ने स्वास्नी कति राख्ने ? भन्ने खालका माग अघि सार्नुले कुन कुराको संकेत गर्ला? दुखको कुरा रविना जस्ता प्रबुद्ध महिलालाई समेत नेपालमा बहुविवाहलाई कानूनले बन्देज लगाएको कुरा हेक्का रहेन छ ।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा अझै बहुपति प्रथा कायम छ । एउटा घरमा रहेका सबै दाजुभाइले एकजना महिलासँग सामूहिक विवाह गर्ने प्रचलन जिल्लाको छोसेर, छोन्हुप, लोमान्थाङ, चराङ, सुर्खाङ, घमी, मुक्तिनाथ, कागबेनी, झोङलगायतका ठाउँहरुमा संस्कृतिको रुपमा परापुर्वकालदेखी चल्दै आएको छ । रविनाकै सन्दर्भ कोट्याउने हो भने यो प्रथा महिलाअधिकारको पक्षमा छ कि छैन? संस्कृति भनिएपनि यो कुप्रथा नै हो, अब यस्तै कुरामा प्रतिस्प्रर्धा गर्न तम्सिने त?
सर्वत्र चर्चा र आलोचना भएपछि मुलुकी ऐनमा भएको परिमार्जित व्यवस्था उल्लेख गर्न बाञ्छनीय लाग्यो । मुलुकी ऐन २०२० को बिहेवारीको महलले बहुविवाहलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । पहिलेको व्यवस्था अनुसार‘श्रीमतीलाई यौन सम्बन्धी सरुवा रोग भै निको नहुने भएमा, श्रीमती निको नहुने गरि बहुलाएमा, श्रीमतीका कारणबाट सन्तान नभएको प्रमाणित भएमा, श्रीमती हिँडडुल गर्न नसक्ने भएमा, श्रीमतीका दुबै आँखा नदेख्ने भएको खण्डमा मात्रै अर्की श्रीमती बिहे गर्न पाइने व्यवस्था थियो तर संशोधित व्यवस्था अनुसार लोग्ने र स्वास्नी अंशबण्डा भई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक अर्को विवाह गर्न कानूनत निषेध गरिएको छ । सरकारले नै स्पष्टसँग भनेको छ समाजमा बहुविवाह विरोधी कानून भएपनि व्यवहारमा त्यसको असर नदेखिएका कारण मुलुकी ऐनको दफा संशोधन गर्नुपरेको हो ।
तपाईहरु जस्तो समाजको अगुवा व्यक्तित्वहरुले यति हल्का अभिब्यक्ति दिएर क्षणिक चर्चाको पात्र बन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? त्यो तपाईको तजविजको कुरा होला । यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा लोग्ने मान्छेले तीन चारवटी श्रीमती भित्राउँदा सम्मान गरेको छ र कानुनले ? विगतको इतिहास कोट्याएर अर्नगल कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने कि साँच्चिकै आधा हिस्सा पाउनको लागि कानूनी लडाइ गर्ने ? अहिले आरक्षणको अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको छ ।
तपाईहरु जस्ता अगुवा महिलाहरुले महिलालाई आरक्षण सधैभरी दिइरहनु हुँदैन, लक्षित समुदायलाई खुल्ला प्रतिस्प्रर्धामा उतार्न सक्ने वातावरण घर परिवार, समाज र आफन्तले तयार गर्न सक्नु पर्छ भन्नेतर्फ जोडदिनु पर्ने होइन र? वोक्सी जस्तो कुप्रथाका कारण दिनदिनैजसो महिलाहरु प्रताडित भएका छन् । यस्ता अन्धविश्वास हटाउनको लागि पहल गर्नुपर्ने होइन र ? अहिले पनि प्रजनन अधिकारको बारेमा धेरै महिलाहरु बेखवर छन् यि सवालमा आवाज मुखरित गर्नुपर्ने होइन र? बिहे गर्ने उमेरमा दुई तीनवटा सन्तानका आमा भइसकेका किशोरी आमाहरुको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित बन्नुपर्ने होइन र? बलात्कारका कारण छोरीहरु हरेक निमेशमा असुरक्षित भइरहेका छन्, कसरी छोरी जोगाउने? पीडकलाई बढीभन्दा बढी कानूनी सजाय कसरी दिलाउन सकिन्छ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने होइन र? श्रीमान्ले जाँड रक्सी खाएर श्रीमती कुट्न थाल्यो भने मदिराको लत हटाउनेतिर ध्यान दिने कि आफु पनि रक्सी खाएर श्रीमान् कुट्न तम्सिने ?
अर्नगल र अव्यवहारिक कुरामा हामी महिलाहरु किन प्रतिस्प्रधा गर्न खोज्छौँ? प्रतिस्पर्धा सकारात्मक कुरामा गर्न सिकौँ न । समाजका गन्नेमान्ने उच्च पदस्थ तहका महिलाहरुले नै यस्ता कुरा गर्न थालेपछि भोलिको पुस्ताले कस्तो अपेक्षा गर्ला? महिला अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हवाला दिंदै कथित सेलिब्रेटीहरु समाजमा अपाच्य हुने भेषभुषामा सजिएको देखिएकै छ । क्षणिक आवेगमा एकैछिनको पर्रर्र तालीको लोभमा युवाहरुको उन्मादले वाहीवाही गरेपनि अन्तत उनीहरु नै त्यस्ता महिला पात्रहरुको कुरा काट्न तल्लिन देखिन्छन् । आफुलाइ पोर्न स्टार ठान्ने अर्चना पनेरु, निकै चर्चित कलाकार मोडल ठान्ने ज्योति मगर, रक गायिका सरस्वती लामा वा अन्य यस्तै युवा पुस्ताका महिलाहरुले ठुलो जमातका माझमा जुन हर्कत देखाए त्यसले उनीहरुलाई नै घाटा भएको छ । उनीहरुले जुन हर्कत गरे त्यसलाई महिलाको स्वतन्त्रता ठान्नु हुन्छ भने त तपाईहरुको बौद्धिकतालाई केही भन्नु छैन । तर समाजले पचाउने र पच्नेसम्मको व्यवहार जो कोहीले गर्नुपर्छ ।
जस्तो कुरामा पनि अधिकार जोडि हाल्ने, पुरुषले यसो गर्दा हुन्छ महिलाले गर्दा किन हुँदैन भन्ने अड्को थापिरहने हो भने त भन्नु केही पनि छैन । कतिपय कुराहरुमा महिलाले जतिसुकै बलमिच्याइ गरेपनि पुरुषको हाराहारीमा पुग्न सकिंदैन, प्रकृतिले नै महिलालाई यस्तै बनाइदिएको छ । जस्तो रविना देशराजले भन्नु भएको छ पुरुषले नुहाएको भिडियो वा फोटो सामान्य हुन्छ समाजले सामान्य ठान्छ । तर महिलाले नुहाएको भिडियो वा फोटोलाई अश्लिल ठान्छ । यो उहाँको कस्तो तर्क हो ।
अधिकार र समानता भन्ने कुरा लोग्ने स्वास्नी कति राख्ने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ कि अन्य विषयहरुमा पनि? देखिएका र नदेखिएका छायाँ फरक होलान् । अहिले पनि अक्सर गरी शहरी भेगमा परपुरुष र परस्त्री सम्बन्धका कारण धेरैजनाको मिलेको घरपरिवार भत्ताभुंग भएको अवस्था छ । तपाईहरु जस्ता शिक्षित, अगुवा व्यक्तिहरु यस्लाई अधिकारमा समानता भन्न रुचाउनु हुन्छ? घरमा अपांग श्रीमान्, बुढ्यौली उमेर, चारजना छोराछोरी त्यागेर गतसाल एक महिलाले छिमेकी पुरुषसँग बिहे गरिन् । श्रीमान् विदेशमा पसिना बगाउन जान्छ, लालाबाला विचल्ली पारेर श्रीमती अर्कैसँग भागेपछि घर फर्किदा न श्रीमती हुन्छ न पैसा? के यो पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने सवाल हो? कुसंस्कारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कि परिमार्जित भएर आफु सच्चिने? कैलालीमा धामीले बोक्सीको आरोपमा एउटी किशोरीमाथि अमानवीय आक्रमण गरे, अब यो प्रथाको विरोधमा आवाज उठाउने कि? महिला बोक्सी हुन्छन् भने धामी पनि बोक्सो हुन्छ भनेर फेरी जनमास भेला गरेर कुटपिट गर्ने? हचुवाको भरमा आवेगमा आएर विकृती र विसंगतिको बारेमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने र पौठेजौरी गर्न खोज्ने चेष्टा कोही कसैले नगरौँ । कानूनविपरितको काम हिजोपनि अमान्य नै थियो, भोलीका दिनमा पनि त्यो अमान्य नै हुन्छ कम्तिमा यस्ता विषयहरुमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने कि?
प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ १४:१४
बुहारी ल्याएपछि छोराले किन बाआमालाई सहँदैनन् ?
माघ २४, २०७४ यमुना अर्याल (काफ्ले)
काठमाडौँ — एउटी महिलाको साथ पाउँदैमा जन्मदाता बाबाआमाको सबै गुण चटक्कै बिर्सने कस्तो चलन ? बुहारीको रुपमा भित्रेकी महिलाले किन यो कुरा बुझ्दैनन् ? जब आफुले आफ्नो श्रीमानका बाबाआमा आफुलाई घाँडो भएर पाल्न सक्दिन, साथमा राख्न नसकेर जानाजान आश्रममा पठाउँछिन् ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार कुल जनसंख्याको करिव ९ प्रतिशत अर्थात २५ लाखभन्दा बढी संख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरु छन्। नेपालीको औसत आयु बढेसँगै ज्येष्ठ नागरिकको सख्यामा पनि बृद्धी भएको छ। पछिल्ला जनगणनाको आंकडाले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बृद्धबृद्धालाई संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको र हालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा ४१ मा लिखित रुपमै “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ'' भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्नुले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा राज्य नै लागिपरेको अनूभुति गर्न सकिन्छ। यति मात्रै होइन, जीवित देवताको रुपमा कहलिएका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सहज, सुरक्षित र सम्मानित बनाउन जेष्ठ नागरिक नीति, कार्यनीति तथा दीर्घकालिन अवधारणासहितको ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना (२०६२) कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ।
केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको स्थापना गरी देशका प्रत्येक जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति समेत गठन भइसकेको छ। मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ ले हरेक व्यक्तिको भेदभावरहित ढङ्गले मर्यादित आफ्नो जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। मानवअधिकारभित्र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार समाहित हुन्छ कि हुँदैन यो सवाल महत्वपूर्ण मानिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक उमेरले गाला चाउरिएका, रोगले थलिएका, लौरीको सहारामा भित्रबाहिर गर्ने केवल बुढाबुढी मात्रै होइनन् उनीहरु हरेक परिवारका जीउँदा देवता समेत हुन्, उनीहरुबाट नयाँ पुस्ताले धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ, नयाँ पुस्ताको लागि बृहत ज्ञानकोष नै हुन् ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रको लागि ज्ञान प्रदायक संग्रालय हुन्।
‘आफुसँग धन सम्पति छ भने चाहेको हरेकचिज किन्न सकिएला तर जन्मदिने बुवाआमा कहिल्यै पनि किन्न सकिंदैन’ यो सास्वत सत्य हो। त्यसैले त भनिन्छ मातापिता र सन्तान बिचको रगतको साइनोको मापन कुनैपनि साइनोसँग हुन सक्दैन। आमाको दुख, पिडा र बुवाको संघर्षले सन्तानलाई संसार देखाउने चेष्टा राख्दछ। हरेक आमाबुवाको सन्तानप्रतिको एकैखाले चाहना हुन्छ, आफ्नो सन्तान असल बनोस्, योग्य बनोस्, भोलि आफु बुढेसकालमा हुँदा रखवारी गर्न सकोस्, सन्तानको काखमा बसेरै सन्तानको प्रगति हेर्दै आनन्दले परलोकको यात्रा तय गर्न सकियोस् आदि आदि...। तर विडम्बना एकाद बुवाआमा बाहेक धेरैको यो सपना अधुरै रहन्छ। जुन सोच राखेर सन्तानको खुशीमा बाबुआमा मरिमेटछन् तिनै सन्तानबाट अपमानित, तिरस्कृत र बुढेसकालमा सहाराविहिन भएर कष्टकर जिन्दगी विताउनु पर्छ, बाबाआमाको लागि यो भन्दा पीडादायी क्षण अरु के होला?
छोराछोरीको बढ्दो विदेशमोहका कारणपनि बाबाआमा थप पीडामा रुमलिन पुगेका छन्। विदेशमा पुगेका छोराछोरीहरु बाबाआमालाई आश्रममा राखेर आफुहरु व्यस्त रहन्छन्। यो कस्तो संस्कार हो? बिदेश जानुपर्ने उनीहरुको बाध्यता होला तर जन्मदिने बाबाआमालाई आश्रममा पुर्‍याएर कुन उदेश्य प्राप्तिको लागि सन्तानले यो सबकर्म गरिरहेका छन्? नैतिक शिक्षाको अभावका कारण पुँजीवादी सोचले रगतको नातालाई विस्तारै मरुभुमिमा परिणत गर्दैछ। अझ यसपछिको पुस्ता कस्तो होला? त्यसको प्रतिविम्ब अहिले नै झलझली देखिइरहेको छ। सन्तान र बाबाआमावीचको दुरी विस्तारै लम्बिंदैछ, क्षणिक स्वार्थका लागि बाबाआमको साइनो चटक्कै बिर्सन पछि पर्दैन अहिलेको पुस्ता।
व्यवहारमा हेरौँ न, दशभाई छोरा जन्मिए पनि बाबाआमाले आफ्नो हातका औँला सम्झेर बराबरी मायाँ गर्छन्, कुनै कुरामा विभेद गर्दैनन्। तिनै छोराहरु हुर्किएर आफु खुसी गर्छन्, छोरी बिहे गरेर अर्काको घर गइहाल्छन्, बुढा बाबाआमा कस्ले पाल्ने हानाथाप हुन्छ। कुनै दाजुभाइले मुख फोरेर भन्न सक्दैनन् बाबाआमा हामी पाल्छौ, दुखी हुन दिंदैनौ, बुढेसकालको टेको बनेर सेवा गर्छौ भनेर। बाबाआमा पाल्नेले जीउनी अर्थात् बाबाआमाको भागको अंश खाने लोभमा बाध्यताले पाल्ने गर्छन्। आफुले हाड्छाला घोटेर हुर्काएका सन्तानले बाबाआमालाई घाँडो बनाएको देख्दा आमाबाबुको हृदय कति फाट्दो हो? उनीहरुको आत्मले कति धिक्कार्दो हो? अचम्मको कुरा कुनैपनि छोराले बिहे अगाडी बाबाआमालाई टाढा देख्दैन, उसले आफ्नो घर भइकन बृद्धाआश्रममा बाबाआमा पुर्‍याउँदैन तर जव श्रीमतीको साथ पाउँछ उसमा यत्रो आत्मबल कसरी आउँछ?
एउटी महिलाको साथ पाउँदैमा जन्मदाता बाबाआमाको सबै गुण चटक्कै बिर्सने कस्तो चलन? बुहारीको रुपमा भित्रेकी महिलाले किन यो कुरा बुझ्दैनन्? जब आफुले आफ्नो श्रीमानका बाबाआमा आफुलाई घाँडो भएर पाल्न सक्दिन, साथमा राख्न नसकेर जानाजान आश्रममा पठाउँछिन्। यदि उनका भाउजु बुहारीको कुरा सुनेर दाइभाइले उनका बाबाआमालाई त्यस्तै व्यवहार गरेभने त्यो पाच्य होला कि नहोला? श्रीमान/श्रीमती भनेका एक रथमा दुई पाग्रा हुन् न कि श्रीमान्लाई अनेक तरहका कुरा बुनेर सासु ससुरालाई बृद्धा आश्रममा धकेल्ने मानवता विरोधी?
गत महिनामात्रै तीनवटा बृद्धा आश्रममा भ्रमण गर्दा बुझेँ एकाद बाहेक अधिकाँश बुबाआमा कोही आफन्त नभएर आश्रममा आएका रहेनछन्। आफ्नो घरको ठेगाना सबैले बताउँथे, उमेर सबैले भन्थे, आश्रममा आएको कति वर्ष भयो? नबिराइकन भन्थे तर जव घरका आफन्तको बारेमा पंक्तिकार प्रश्न गर्थेँ तव उनीहरुको वाक्य रोकिन्थ्यो, अनुहार पढ्न सकिन्थ्यो आँखा रसाएका हुन्थे, मलिन अनुहारमा जवाफ दिन्थे, के भन्नु नानी? तिनीहरुका पनि सन्तान छन् भोलि यस्तै नगराउन, राम्रो व्यवहार गरुन्, भोलि उनीहरुका छोराले पनि बुहारी ल्याउँछन्, बुहारीका कुरा सुनेर यस्तै आश्रममा हाम्रा छोराबुहारी आउनु नपरोस्, डाँडा माथिको घाम भइसक्यौँ आज हो कि भोली? घर छ, छोरा बुहारी छन्, वरपरका छिमेकी छन्, आनन्दले नातिनातिनी खेलाएर घरमा बस्ने, पुजापाठ गर्ने, मन्दिर घुम्ने बेलामा आश्रममा काल पर्खनु परेको छ, काल नआउन्जेल बाच्नैपर्ने भाग्यको खेला...... धाराप्रवाह आँशु सहित बगेका यि पीडाले धेरै कुरा झल्काउँथ्यो।
कोहीकोही बाआमा आफ्ना कोही आफन्त नभएपछि छिमकेीले आश्रममा ल्याएको बताउँथे। तर, धेरैजना बाआमाका छोराले बुहारीको कुरा सुनेर आश्रममा ल्याएका रहेछन्। ति छोराहरुलाई मेरो प्रश्न छ, ९ महिनासम्म गर्भमा राखेर कष्ट सहेर जन्माउने आमा, आफ्नो दश धारा दुध खुवाएर हुर्काउने आमा, आफ्ना खुट्टा फुटेर चर्रर्र रगत आउँदापनि छोराछोरीलाई जुता चप्पलको जोहो गर्ने बुवा, आफु भोकै बसेर छोराछोरीको लागि चारो जुटाउने आमा, एकदिन बच्चा विरामी हुँदा सात दिनसम्म ननिदाउने आमा, छोराछोरीको उपचारको लागि अर्काको काममा काँधको छाला खुइलाउने बुवाको संघर्षलाई लात मारेर तिनै बाआमाले हुर्काएर, स्याहार गरेर लाठे बनाएर, तिनै बाआमाले श्रीमती खोज्न सक्ने बनाएर बिहे गरेको छोराले श्रीमती पाएपछि उसैका कुरा सुनेर बाआमालाई आश्रममा मिल्काएर कुन आत्माले न्यानोमा बसेर तातो खानेकुरा खान सक्दो हो?
पुष, माघको चिसोमा असी, नब्बे वर्ष पुगेका बुढाबुढी हजुर बाआमाहरु लौरीको सहारामा भित्र बाहिर गरेको देखिन्थ्यो। खुट्टामा बाक्लो मोजा थिएन, अंगमा बाक्लो लुगा थिएन एकजना ८३ वर्षको बुवाले भने ‘आफुले जन्माएका सन्तानले त मिल्काए अरुका छोराछोरीले धन्न आजसम्म पालेका छन् के भन्नु र खोइ’? ‘राम्रोसित सास गइदिए हुन्थ्यो, अहिले यस्तो हुन्छ भन्ने जानेको भए सन्तान नपाइकन बसिन्थ्यो, उ बेलामा छोरो पाउँदा के के न होला भन्ने ठानियो कम्तिमा एउटी छोरी भइदिएको भए कठै मेरो बा त भन्थी होला, छोराको मन बुहारी पाएपछि रुखो हुँदो रहेछ।'
‘पहिलेपहिले काखमा खेलाएको छोरो खोक्दा रातभरी बाआमा निदाउन सक्दैनथे, मरिहाल्छ कि भन्ने पीरले भातै नखाइ बसियो तर अहिले बुढा बाआमा रोगले थल्लिएर एकैछिन खोक्दाखेरी छोरा बुहारीको निद्रा बिथोलिन्छ, कुमालेको चक्र हो समय बुढ्यौली सबैलाई आउँछ चोला फेर्ने सबैले हो चित्त बुझाउँदै बस्नुपर्छ’, बत्ति कात्दै गरेकी एक आमाले पोखेको यो पीडा मिश्रित भावले तरगिंत बनायो।
बाआमाको सम्पति चिराचिरा पारेर अंश लगाउँछन छोराहरुले तर तिनै छोराको कमाइको बारेमा सोध्ने अधिकारसमेत बाआमालाई हुँदैन। सन्तानको कमाइको १० प्रतिशत बाआमालाई दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ, कागजी रुपमा व्यवहारमा कहिलेदेखि लागु हुन्छ पत्तो छैन। अबको पुस्ता बाआमा पाल्नुको साटो पैसा दिएर अधिकारबाट उम्किने प्रवृति नबढ्ला भन्न सकिंदैन। सन्तान र अभिभावकवीचको सम्बन्धलाई पैसाले होइन आत्माले कसिलो बनाउनुपर्छ। कुनै जागिर नगर्नेहरुले बाआमालाई १० प्रतिशत रकम कसरी दिन्छन्? पैसाको माया क्षणिक हुन्छ, भावनाको माया दीर्घकालिन हुन्छ। रगतको नाता पैसामा बिक्ने खालको बन्नुहुँदैन। एकजना छिमेकी बुवाको पोहोरसाल निधन भयो, काजक्रियाको लागि विदेशबाट छोरा आए तर भाडामा मान्छे खोजेर १३ दिनसम्म क्रिया बसाले छोराले केही गरेनन्। हुन त जिउँदो हुँदा वास्ता नगर्नेले मरेपछि कोकोहोलो मच्चाउनु बेकार हो तैपनि आफु हुँदाहुँदै अर्को मान्छेलाई क्रिया बसाउनु कस्तो संस्कार होला? यस्तो छोरो हुनुभन्दा त नभएकै बेस छिमेकीले कुरा काटे तर केही प्रभाव देखिएन।
हाम्रो समाजमा बाआमा पाल्ने दायित्व छोराको काँधमा छ, अब यस्तो हुनुहँदैन। छोरा र छोरी बराबर हुन्, बुआमा छोरीले पनि पाल्न पाउनुपर्छ। छोरीले जसरी आफ्ना बाआमालाई सम्मान गर्छिन् सासु ससुराको हकमा पनि त्यही व्यवहार हुनुपर्दछ। कसैकी बुहारी हुन पुगेकी नारी पनि छोरी हुन्, उनले आफ्ना बाआमालाई गर्ने व्यवहार सासुससुराको हकमा गर्न सकिन् भने कुनैपनि छोराले आफ्ना बाआमालाई आश्रममा पुराउँदैनन्। जहिलेपनि बुआमापछिको साइनो श्रीमतीको हुन्छ। अघिल्लो साता प्रकाशित भएको समाचार अनुसार धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको असी वर्षका बुवालाई आफ्ना छोराहरुले सम्पती आफ्नो नाममा बनाई घरबारविहीन बनाए। छोराहरुले पुस्तेनी घडेरी र जग्गा आफ्नो नाममा गराएर घरबाट निकालेपछि असी वर्षीय बृद्ध बुवा न्याय खोज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा छोराविरुद्ध निवेदन दर्ता गराउन पुगे। यो उमेरमा एउटा बाबुमाथि छोराले गरेको यो भन्दा ठुलो अत्याचार, ठुलो अपराध अरु के होला? यस्ता घट्नाहरु हरेक दिनजसो देशका हरेक ठाउँमा घटिरहेका हुन्छन्। आखिर किन यति अमानवीय, किन असहिष्णु भइरहेको छ अहिलेको पुस्ता? अहिलेको पुस्तालाई लाग्दो हो हामी बोट नभइकिन त्यसै फल लागेका हौँ भनेर तर आफुले सन्तान जन्माएपछि थाहा हुन्छ बाआमा बन्दाको सास्ती र कष्ट।
घरपरिवारमा राम्रो व्यवहार, मिठो बोली व्यवहार पाएको भए बुढाबुढी बाआमा चिसो सडकमा बसेर पक्कै आन्दोलन गर्दैन्थे। राजधानीको मिन भवनमा लामो समयसम्म ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना हक अधिकारको लागि आन्दोलन गरे, आन्दोलनकै दौरानमा कतिपय बृद्धबृद्धाको सडककै चिसोले निधन भयो। ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ४ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफुसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा गर्ने व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकले पालनपोषण तथा हेरचाहका लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षसमक्ष उजुरी दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ।' बाआमा आफ्नै सन्तानको विरुद्धमा उजुरी गर्न जाँदैनन् बरु आफै कष्टपुर्ण जिन्दगी बिताउन चाहन्छन्, यदाकदा उजुरी गरेपनि उनीहरुले न्याय पाउँदैनन्। राज्यले बृद्धभत्ता बढाएर ज्येष्ठ नागरिक पालिरहने कि सन्तानलाइ संस्कारको बारेमा सुसुचित गराउने? छोरी ज्वाइँलाई छोराबुहारीलाई भएपछि बाआमा चाहीं राज्यको बृद्धभत्ताको आशमा बाच्नुपर्ने?
प्रकाशित : माघ २४, २०७४ १४:०४